साप्ताहिक संवाददाता , फाल्गुन ५, २०७६
नेपाली गायक दिवेश पोखेरलले अमेरिकन आइडलको १८ औँ सिजनमा शिर्ष २० को यात्रा तय गरेका छन्। कर्णाली, प्रलय बीजस्ता गीत बजारमा ल्याइसकेका २० वर्षीय पोखरेल ६ वर्षदेखि अमेरिकामा बस्दै आएका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
नेपाली कथानक चलचित्र ‘सेन्टी भाइरस’मा समावेश ‘आफ्नो पार्टी जिताइदे’ बोलको गीत रिलिज भएको छ । सार्वजनिक गीतमा प्रमोद खरेल र विद्या तिवारीको स्वर सुन्न सकिन्छ । हर्क साउदले लेखेको गीतमा संगीत भने सुशान्त गौतमले गरेका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
चलचित्र ‘आमा’ निर्मात्रीको सहयोग
केशव भट्टराइको निधनपछि आर्थिक संकटमा रहेको परिवारलाई पाण्डेले १ लाख १ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेकी हुन् । निर्मात्री पाण्डेले भट्टराई पत्नी नीता भट्टराइलाई भेटेर उक्त रकम सहयोग गरेकी हुन् । पुरा पढ्नुहोस्
गायिका संगीता रायमाझीले ‘तिम्रो माया कती दिनलाई’ बोलको गीत सार्वजनिक गरेकी हुन् । गीततको म्यूजिक भिडियोमा भने अभिनेत्री वर्षा राउत र मोडल विकास लामिछानेले जोडी बाँधेका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
निशाको आमा बनेपछिको मुड
अभिनेत्री निशा अधिकारीले आमा बनेपछि पुन: चलचित्र क्षेत्रमा पुनरागमन गर्ने मुड बनाएकी छिन् । क्रिकेटर शरद भेसवाकरसँग विवाह गरेपछि अघिल्लो वर्ष अमेरिका पुगेर पहिलो सन्तान छोरा जन्माएपछि अहिले आएर निशाले पुन: चलचित्रमा फर्कने संकेत गरेकी हुन् । पुरा पढ्नुहोस्
काठमाडौंमा क्यान इन्फोटेक : नयाँ ब्राण्ड र आकर्षक छुट
अपरेटिङ सिस्टम सफ्टवेयर, नेटवर्किङ सोलुसन, मोबाइल सोलुसन, सेक्युरिटी सोलुसन, इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रोनिक्स, सोलार पावर सिस्टम, इन्भर्टर, युपीएस, ल्यापटप तथा डेस्कटप कम्प्युटर, प्रिन्टर, पावर सिस्टम, कम्प्युटर एक्सेसरिज, एन्टिभाइरस सफ्टवेयर, बैंकिङ सोलुसन, सीसीटिभी र हार्ड डिस्कजस्ता उत्पादन प्रदर्शनीमा राखिने आयोजकले जानकारी दिएको छ । पुरा पढ्नुहोस्
नयाँ आविष्कारलाई प्राथमिकता दिएका छौं
युवाहरूलाई आइटीमार्फत कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर प्रशिक्षित गर्ने स्टलहरू छन् । एक सयभन्दा बढीका स्टलमा नयाँ–नयाँ सिकाइ हुन्छन् । यहीँ निर्माण भएका नयाँ इनोभेन्सनलाई छनोट गरेर पुरस्कारसमेत प्रदान गर्छौं । पुरा पढ्नुहोस्
मृगौला कसरी स्वस्थ राख्न सकिन्छ ?
मृगौला रोगमा खानाको साथै औषधी पनि एउटै समयमा तोकिएको मात्रामा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसले गर्दा मृगौलाको कार्यक्षमतामा कमी हुन पाउँदैन । पुरा पढ्नुहोस्
मृगौलाका बिरामीले के खाने ? के नखाने ?
संगीता लामिछाने, डाइटिसियनफाल्गुन ५, २०७६
तरकारी : मेथीको साग, चाइनिज साग, सलाद, साग, चुकन्दर, लौका, घिरौला, स्कुस, काँक्रो, ग्याँठकोबी, चिचिन्डो, परबर, हरियो बकुल्ला, हरियो मटरकोसा । पुरा पढ्नुहोस्
खेल होइन, झेल पनि हुन्छ
पछिल्ला केही वर्षयता नेपाली चलचित्रका एवार्डहरूको गन्तव्य विदेश हुन थालेका छन् । रोजगारीका लागि विदेशमा बस्ने नेपालीको बाक्लो जमघट हुने देश आयोजकको रोजाइमा बढी पर्ने गरेको छ । पुरा पढ्नुहोस्
सुनिल थापासँग छोटो गफ : भन्छन्, ‘बलिउडको अफर झन् बढ्यो'
रामजी ज्ञवाली, फाल्गुन ५, २०७६
नेपाली हुनुको नाताले नेपालको चलचित्र उद्योग विश्वभर पुगोस् भन्ने चाहाना स्वभाविकै हुन्छ । यद्यपि, नेपाली चलचित्रमा काम गर्नुअघि बलिउडमा काम गर्थे । बलिउड संसारकै ठूलो चलचित्र उद्योग हो, यो स्विकार्नुपर्छ । पुरा पढ्नुहोस्